Wamkelekile eKhaya eBettendorf, IA
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguEthel
Qaphela: Abahambi bamazwe ngamazwe badinga uGonyo lwe-COVID 19/Uvavanyo olungenayo kwiiyure ezingama-24. Siphuma nje kwi-I-74. Ukufikelela ngokulula kwi-IL. Umgama wokuhamba: YMCA, Theatre, Restaurants incl Buffalo Wings, Brewery, Los Agaves. Khwela indlela yebhayisekile ukuya kwiipaki ezikufutshane okanye ecaleni kweMississippi. Ukupaka ngaphandle kwesitrato. Igumbi lokulala / ikhitshi, kwinqanaba elisezantsi, lisaqaqambile kwaye likhanyiswe kakuhle. Amanzi aseBhodlela eFrijini nakwiMenzi yeKofu/Iketile yamanzi ashushu (iti & nekofu). Ikhebula/i-Intanethi zigqwesile. Ndinqwenela ukubona!
Igumbi lokulala labucala kunye negumbi lokuhlambela eline-closet enkulu, idesika yokusebenza kunye ne-recliner yokubukela iTV okanye ukufunda incwadi. Igumbi elincinci lesibini lisebenza njengekhitshi labucala elinembiza yekofu, itoaster, ifriji encinci enamanzi, imicrowave kunye neseti encinci yedinette. Iipleyiti zephepha, izixhobo zeplastiki, ibhodi yokusika, isivuvu, imela, iikomityi/iiglasi ezinikezelweyo.
Indawo entle, ezolileyo enemisebenzi emininzi ekufutshane ukuba uyonwabele. Hamba ubaleke okanye uhambe kwindlela yebhayisekile ngaphambili. Yitya kwindawo yokutyela ekufutshane. Ukonwabele ukuthenga kwenye yeendawo zokuphumla kwilali eseMpuma okanye eLeClaire. Kufuphi kakhulu kwibhulorho ye-I74 kunye nezinto eziluncedo zalapha ekhaya.
Umbuki zindwendwe ngu- Ethel
Ndihlala ndifowuna okanye ndithumele umyalezo xa ndingekho ekhaya. Siyavuya ukunika iindwendwe ubumfihlo okanye ukunxibelelana njengoko zinqwenela.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bettendorf